दशगजा क्वारेन्टाइनमा ‘आरडीटी’ जाँच कहिले ? – sunpani.com
दशगजा क्वारेन्टाइनमा ‘आरडीटी’ जाँच कहिले ?
सुनपानी । ३ बैशाख २०७७, बुधबार मा प्रकाशित
नेपालगञ्ज – १५ देखि २१ दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिलाई ‘आरडीटी’ जाँच गरेर रिपोर्ट नेगेटिभ आएमा घर पठाइदिने भनिएको छ । राप्तीसोनारी, नरैनापुर, खजुरा र जानकी गाउँपालिकाबाट यी सबै प्रक्रिया पूरा गरेर डेढ सय बढी घर गइसकेका छन् ।
नेपालगञ्जको दशगजामा बसेका व्यक्तिको हकमा अहिलेसम्म ‘आरडीटी’ जाँच गरिएको छैन, दश जनाको ‘पीसीआर’ बाहेक । त्यहाँ भारतका विभिन्न शहरबाट आएका १ सय ८१ जना छन् । उनीहरु दशगजामा आइपुगेको १५ दिन कटिसकेको छ ।
आरडीटी जाँच गर्ने बित्तिकै रिपोर्ट नेगेटिभ आएकाहरु घर जान खोज्ने र उनीहरुलाई कसरी घरसम्म पु¥याउने अप्ठेरो त छदैछ । किनकी, त्यहाँ धेरै जिल्लाका मानिस छन् । घर पठाउने समस्याले गर्दा क्वारेन्टाइनमा राखि राख्ने हो भने नेपालगञ्ज उपहानगरपालिकाले कहिलेसम्म पाल्न सक्छ ? यी समस्याहरुले अधिकारीहरुलाई पक्कै पिरोलेको हुनुपर्छ ।
उनीहरु चैत्र १७ गते रुपैडिहा नाकामा आइपुगेका थिए । भारततिर नै बसे एक दिन । त्यसपछि नेपाल प्रवेश गरे । जयसपुरस्थित सुख्खा बन्दरगाहको जग्गामा एक रात बिताए । त्यसपछिको आन्दोलनले दशगजामा टेन्टमा बस्न पाए । अब उनीहरु कहिलेसम्म टेन्टमा बसिरहन्छन् ? लकडाउन त बैशाख १५ गतेसम्म थपिएको छ ।
उनीहरुको आरडीटी टेष्ट गर्ने र कसरी घरसम्म पु¥याउने बारेमा अधिकारीहरुले छलफल गरिरहेका छन् । यसअघि नेपालगञ्जबाट नजिन नजिक जिल्लाका मान्छेलाई एउटा गाडीमा राखेर पठाइएकाले त्यो उपाय निकाल्न सकिने जानकारहरु बताउँछन् ।